Ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ngwaahịa - China Undercarriage Parts Factory
Sprocket / nke
Mpempe akwụkwọ / akụkụ ahụ na-etinye aka na nchịkọta njikọ nke usoro egwu wee na-arụ ọrụ igwe. Usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị dị mkpa maka ogologo ndụ na ogologo oge. BONOVO agba na sprockets bụ isiokwu multiple quality achọpụta ofụri n'ichepụta usoro iji hụ na ha izute stringent nkọwa. Ngwurugwu anyị dị maka Komatsu, Hitachi, Kobelco, Daewoo, Hyundai, Volvo, Jcb wdg Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ OEM dịka eserese gị ma ọ bụ ihe nlele.
Sochie Mgbanwe / Tensioner
Track adjuster ma ọ bụ tensioner na-akpọ track adjuster cylinder nke a na-eji na na excavators na bulldozers. Bonovo Track adjusters dị maka ụdị niile na ụdị nke excavators, Hitachi, Komatsu, Caterpillar na ụdị ndị ọzọ nke excavator crawler regulators na asọmpi ahịa. Nzukọ mgbatị egwu nwere mmiri na-agbapụta agbapụta, cylinder na yok.
Track nche bụ ihe dị mkpa ịnyịnya ibu maka excavator undercarriage. Iji nyere gị aka ịghara agbụ usoro siri ike ogologo ndụ, onye na-eche nche na-arụ ọrụ dị oke mkpa ma dị mkpa iji gbochie njikọta egwu ma ọ bụ agbụ ịgbanapụ ma ọ bụ iwepụ. Enwere ike ịhazi egwu egwu egwu dị ka igwe gị na eserese eserese.